Fanamarihana ny 26 jona: nofoanana ny fiaraha-misakafo eny Iavoloha | NewsMada
Fanamarihana ny 26 jona: nofoanana ny fiaraha-misakafo eny Iavoloha
Niova tanteraka sady ao anatin’ny politikan’ny fitsitsiana. Tsy ho tahaka ny teo aloha ny hetsika sy ny fanamarihana ny faha-59 taona niverenan’ny Fahaleovantena amin’ity indray mandeha ity.
“Tsy hisy ny fiaraha-misakafo tahaka ny teo aloha eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha amin’ny 26 jona. Hatao amin’ny 2 ora tolakandro ny matso eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina…”, hoy ny filohan’ny komitin’ny fankalazana ny fetim-pirenena , ny Jly Randrianantoandro, omaly. Nambarany fa tafiditra ao anatin’ny fanovana izany. Fanovana toe-tsaina, fihetsika, fahaiza-miaina, araka ny nambarany.
Ny helikoptera sy ny vondron-kery manokana…
Mba afaka manaraka ny fizotry ny matso eny Mahamasina ny any amin’ny kaominina sy ny faritra rehetra any amin’ny alalan’ny fahitalavitra na onjampeo satria hatao ny tolakandro izany hetsika ataon’ny eo anivon’ny Foloalindahy. Izany hoe samy mankalaza ny fety avokoa ny maraina.
Anisan’ny hampiavaka ity indray mandeha ity koa ny fampisehoana manokana ataon’ny vondron-kery manokana avy amin’ny tafika. Eo koa fandraisana anjaran’ny miaramila mivondrona aty amin’ny ranomasimbe Indianina (Fazoi) amin’izany hetsika izany. Manampy ireo ny fampisehoana ireo angidimby vao nafaran’ny fitondrana.
Anisan’ny vahiny ho avy ny filoha Kagame
Ankoatra ireo, anisan’ny vahiny manan-kaja hanatrika izany fetim-pirenena izany ny filoha Roandey, Paul Kagame. Manampy izany ireo masoivoho vahiny sy ny avy amin’ny fikambanana iraisam-pirenena eto amintsika.
Tsiahivina fa maherin’ny 2 000 hatramin’ny 3 000 any hatrany ireo vahiny asaina hiara-kisakafo eny amin’ny lapan’Iavoloha amin’ny vanim-potoana tahaka izao. Mandany volabe sy solika izany, ankoatra ny mety ho kolikoly any ambadika any “bizna”, amin’ireo natao hiantoka izany tamin’ireo fitondrana nifandimby.
Etsy andaniny, tokony hazava sy fantatra ny vola tokony ho lany amin’ny lanonana tahaka ireny. Tokony hampahafantarina ny rehetra koa ny hamindrana izany vola izany amin’ity indray mandeha ity na natao hanampiana sehatra tahaka ny ahoana ?